ရေချိုးဆင်းချိန်…………………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ရေချိုးဆင်းချိန်………………….
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Mar 30, 2012 in Local Guides, My Dear Diary, Photography | 35 comments
1ဒုဋ္ဌ၀တီ ရေကြည်ချောင်းရဲ့ ရေချိုးဆိပ်.............. တစ်ဖက်ကမ်းလှမ်းအကြည့်
2 ရေချိုးဆင်းလာတဲ့ မြေးအဖွားတစ်စု
4 ကိုသော့နဲ့ဖရဲက သဘာဝအတိုင်းရိုက်မယ်ပြောလို့ရှက်ပြီး လက်ကလေးနဲ့အုပ်ထားတာ(မော်ဒယ်တွေနဲ့များနေရာလဲလိုက်ချင်ပါရဲ့)
5 ဖွားဖွား သားလဲရေထဲဆင်းချိုးမှာနော်...................
6 ကလေးလေးကို ဒီလိုဆွဲယူပြီးတော့.......................
8 ရေထဲကို ဒီလိုကြီးပစ်ကျသွားတာပေါံ..................
9 အဲဒီကျတော့ ကလေးက ဒီလိုဒီလိုငိုတော့တာပေါ့
10 အငယ်ဆုံးလေးကတော့ ရေထဲမှာပျော်နေတာဘဲ........................
11 ကလေးလေးတွေက ကြောက်နေရှာတာ ဒီလူသုံးယောက်ငါတို့ပုံတွေပြပြီး လူကုန်ကူမလို့လားမသိဘူးဆို မော့ကြည့်နေတာရယ်။
12 ဒီလှေကြီးက ငါတို့ရေကူးတဲ့နားလာရှုပ်နေတာ သွားကွာ.............................................
14 သူတို့ကိုကြည့်ရင်း ရေချုိးဆင်းချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် အ၀တ်ကလဲအပိုမပါ သူတို့လိုလဲချုိးလို့မဖြစ်ဆိုတော့ ရေချုိးချင်စိတ်ကို မြိုသိပ်ပေါ့
15 မော်ဒယ်ဂဲဖွားဖွားကို အပေါ်စီးရိုက်ချက်..................
16အဖွားကခေါ်လို့သာ တက်လာရတာ ရေချုိးလို့ဝသေးဘူး
“နှစ်ပုံးလောက်ဘဲချိုးနော် ရေက တစက်ချင်းဘဲလာနေတာ “လို့ ပြောသံကြားလိုက်ရပါတယ်။
အ၀တ်မပါတဲ့ပုံတွေ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကိုတရားဝင်ဖော်ပြခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောဖူးတယ် …
မာမီဖရဲရိုက်တုန်းက မော်ဒယ်ဂဲလ်ကို အဖွားကြီးလို့မထင်ခဲ့ရဘူး … အခု မာမီပေါက်ဖော်ကောင်လုပ်မှပဲ အဖွားကြီးမှန်းသိရတော့တယ် …
အရီးလတ်ရေ … အခုတော့ ငြင်းအုန်းမလား …
အခု ဒေါ်မြလေး နဲ့ ရုပ်ရော၊ အသံရော တူတာ တွေ့ကြပြီ မဟုတ်လား။
ဟင်း ကပေါက်နော် ….
မပြောတော့ဘူး၊ မပြောတော့ဘူး၊ ပြောကို မပြောချင်တော့ဘူး။
မာမီဖရဲ ရဲ့ အလှစစ် ကို အခုတော့ သေချာ တွေ့သွားပြီ။
၃ယောက် ပေါင်းပြီး တော်တော် လက်ဆော့ခဲ့ကြတာပဲ..
မန်း ကို လာလည်ရင်တော့ လိုက်ပို့ဖို့ မမေ့ကြနဲ့နော်။
ကြော်ညာတွေ ဝေထားတာ ဖတ်ပြီး တော်တော် အားကျ နေပြီနော်။
အဆိုပါပုံ ဖော်ပြခွင့်အတွက် မော်ဒယ်ရီလိစ် .. အဒတ် ရီလိစ် ..ချိုင်း ရီလိစ်
တခါတခါမှာ ကန်းဒစ် ဖိုတိုဂရပ်ဖီ နဲ့ ကော်ပီရွိုက် ကြားက နယ်နမိတ်က
ဒီအပိုင်းကို သများလည်း သေသေချာချာ လေ့လာာထားဖို့ လိုမှန်း
နှဖူးမှ ချွေးစများကို သုတ်ကာ…အဟုတ်ကြီး သဘောပေါက်နေပါကြောင်း..
ကိုပေါက် ရေချိူးဆင်းချိန် ပုံတွေကြည့်ပီး မွန်ကစ်တို့ အညာမြေ မုန်းချောင်း မန်းချောင်းကို သတိယမိတယ်… ဟိ!!! မီးတို့လဲ အဲလို ရေချိူးခဲ့တာ….. :D
ကိုပေါက်ရဲ့ ဒီးဒုတ်လမ်းက ပုံပြင်လေးကို ကြည့်ရှု့ခံစားသွားပါသည်။
အဲအထဲက ကလေးကို ကိုင်မြှောက်ပြီး ရေထဲပစ်ချတဲ့သူကို ကလေးသူငယ် အနိုင်ကျင့်မှုနဲ့ တရားစွဲရမယ်။
ကျေးဇူးတော့ သိတတ်ပါစေ။ :D
ကိုပေါက်ပေါ့ မမရယ် … ခလေး ဒိုက်ပစ်တာ ရိုက်ချင်နေတာ ………. ဒိုက်ပစ်လေ ချည်းပြောနေပေမယ့် ………. ဘယ်ကလေးမှ သူ့ကို ဒိုက်ပစ်မပြတော့ ………… ရေထဲက ကလေးကြီးက …….. အရမ်းအားနာလာတာနဲ့ ………….. သူ့ညီမလေးကို လေထဲမြောက်ပေးလိုက်ပါလေတော့ …….. ကလေးမှာ …….. လန့်ပြီး ငိုပါလေရောဗျာ ………..
15 မော်ဒယ်ဂဲဖွားဖွားကို အပေါ်စီးရိုက်ချက်……………… က
ကိုပေါက်စတိုင် အမြင်ဒေါင့်စောင်းစောင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကို ကြိုက်တယ်။
လေးပေါက်ကလဲ ရေချိုးချင်တာများ ချိုးတာမဟုတ်ဘူး အ၀တ်အပိုမပါလဲ ကလေးတွေလိုပဲ ချိုးလိုက်ပေါ့ဗျာ.. ဟိဟိဟိ..
ဘေးမှာလဲ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ့်သူက လဲ အသင့်… မင်းအုပ်စိုးလို နာမည်ကြီးသွားမှာဗျ… ဟဟဟ :D
ကိုပေါက်ရေ့ မော်ဒယ်လေးတွေက ဘယ်ကငှားလာတာလဲဗျ
ငယ်ငယ်ကတော့ ရွာနားလဲနီးတာနဲ့ ရွှေစာရံဘုရားကို အမျိုးတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ သွားကြရင်း ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ထဲမှာ ရေဆင်းချိုးဖြစ်ကြတယ်၊ လေးပေါက်ရဲ့ ပုံတွေကြည့်ပြီး ငယ်ဘ၀ကို ပြန်တမ်းတမိသွားတယ်..
ကျုပ်တို့ ငယ်ငယ် က လဲ အဲလို ပဲ ချိုးခဲ့ ရတာ ကို သတိယတယ် ဆြာပေါက် ရယ်။
ရွာ ကမ်း စပ် သောင်ပြင်က ဆင်ခြေလျော ပြေ ပြေ လေး ရေ လယ်ဘက် ကို ဆင်းသွာတာ ဆို တော့ ရေချိုး ရေကူး လို့ တကယ် ကောင်းပေါ့။
မြစ်ဝကျွန်း ပေါ် ဆို ပေမဲ့ ဧရာဝတီ မြစ်ခွဲ ကြီး ကိုး ခု ထဲ က တစ်ခု ဆို တော့ ရေ အတော် ကြည်လင်ပါတယ်။
ခု ပုံ ထဲ က ခလေး တွေ လို ပဲ ဂျွန်း ထိုး၊ ရေ ကူး စုံနေအောင် ကစားပြီး အားရမှ ပြန်တက်ကြ တာလား။
ရေချိုးတာ ချေး ပြောင် မပြောင် တော့ မသိဘူး တခါတလေ မေးစေ့ ၊ နှုတ်ခမ်းတွေ မှာ ရေညှိ တွေ ပေနေတာ ကုန်းပေါ် ရောက်မှ သတိထားမိပြီး နှစ်ခါပြန် ရေ ချိုးခဲ့ ရတာ တွေ လဲ ရှိခဲ့ သေးတယ် ဗျ။
ဖရဲမ နာနင့်ကိုရှာနေတာ နင့်ပုံက ပုံ 18မှာလေ အဟိ ….. အခုမှ သားပုံမပါဘူး ဘာဘူးနဲ့ စကား လမ်းကြောင်းလွှဲနေတယ် ….. လေးပေါက်ရေ ရိုက်တဲ့ပုံတွေ မကုန်မချင်းတင်ပါ သမီးကိုငြင်းဆဲ နေသလိုပါပဲ ရေတွေ့ရင် မနေနိုင်တဲ့စိတ်ကို ဆွနေတာလား …..
သူများနိုင်ငံက သစ်သီးဝလံတွေ ဝယ်စားနေရတာ
ရွှေရှာ ကျောက်တူးတဲ့သူတွေနဲ့ မတွေပါစေနဲ့လို့
တကယ် သဘာဝ ကျတဲ့ ပုံကောင်းလေးတွေပါ… ကိုပေါက်ရေ….
ဦးသီး ကလည်း အဲ့လို မရိုက်ပါနဲ့ ရှက်တာပေါ့ သူများတကာ ဟင့် ဆိုးပါ့
အဲဒီဦးသီးကပြောမရဘူး လေးပေါက်လို အလစ်ချောင်းရိုက်ပါဆိုတာပြောလို့ရဘူး။
လေးပေါက် ရေက ကြည်နေသေးတာဆိုတော့ သိပ်မပျက်စီးသေးဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ ခုနောက်ပိုင်း မြစ်တွေ ချောင်းတွေ ဆို ရေတွေ နောက်နေ တာတို့ အမှိုက်တွေနဲ့တို့ ဟိုဓာတ်ဒီဓာတ်တွေ ပါနေနဲ့ဆိုတော့ ဒီလို ကြည်တဲ့မြစ်လေး ရှိနေသေးတာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။
ဒါနဲ့ အပေါ်စီးက ရိုက်ထားတာ မတော်များ ပြုတ်ကျမယ်ဆို အရှိန်သေးမယ် မထင်ဘူး။ အမြင့်ကြီးလားလို့။
သိပ်မမြင့်ပါဘူး ဆယ်ပေလောက်မြင့်တဲ့ကမ္ဘားအစွန်းလေးက တက်ရိုက်တာပါ။
နယ်ဖက် ကို သွား ရင် ကလေး တွေ က ကင်မလာမြင်တာနဲ့ သူ့ကိုရိုက်ပေးပါ။ ငါ့ကိုရိုက်ပေးပါနဲ့ အတင်းကို မော်ဒယ်လုပ်ချင်ကြတာတော့ အမှန်ဘဲ။
အောက်ဆုံး ပုံကတော့ အင်တာနက်ထဲ မှာ ဒါမျိုး တင်တာ တရားမဝင်ဘူး ကပေါက်ကြီး။
ဒီမှာ ကလေးတွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ နေရာမို့ ဟိုဟာဒီဟာ “ချရာ” လုပ်ခံရတာကို ပြန်မျှတာပါ။
ချိတ်ချိုးနဲ့။ ဟိ :D
အဲဒီလို နေရာတွေကို တကယ်ဘဲ သွားလည်ချင်လိုက်တာ ကပေါက်ကြီးရာ။
အမြင် နဲ့ ခေါ်သွားတာ ကို သင်းခရုပါ ဗျား။
ကျုပ်လဲ ပြည်ပနေရာတွေ ကို သွားရမှာထက် ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာက ကျေးလက်ဒေသလေးတွေကို ပိုသွားချင်ပါ့။
ပုံ ၁၅ အကြိုက်ဆုံး။
ကိုပေါက်ရေ…သဘာဝ ကျကျ ပုံရိပ်လေးတွေအတွက်…ကျေးဇူးပါပဲ။
မြင်ရတာ..စိတ်ကို တမျိူး.. အေးမြစေပါတယ် ။ မြို့ ပြရဲ့ …..ရှုပ်ထွေးမှုတွေ.ကြားမှာ နေရသူ ကျွန်တော့်အတွက်တော့..ဒီပုံလေးတွေက စိတ်အပြောင်းအလဲ…ကို ဖန်တီးပေးပါတယ် ။
ကိုပေါက်တင်တဲ့ ပို့စ်တွေအားလုံး ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံပိုးရှိတဲ့လူဆိုတော့ ဓါတ်ပုံပို့စ်လေးတွေဆို ပိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ထဲမှာတော့ ပုံ ၁၅ နဲ့ ပုံ ၁၆ ကို အကြိုက်တွေ့မိပြီး
ပုံ ၁၆မှာ ကလေး နှစ်ယောက်ပုံမပါဘဲ ရေပြင်ဘက်ကို နည်းနည်းပိုယူထားလိုက်ရင်
အရမ်းမိုက်သွားမယ်လို့ ဇွတ်ကြီး ထင်မြင်ချက်ဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုလတ်ရေ နက်ဖြန်မနက်ကော်နက်ရှင်ကောင်းရင် အောက်ဆုံးပုံဖျက်ပေးပါမယ်။
ကိုချောရေ အခုပိုစ်က ကလေးတွေရေချိုးတာ အဓိကမို့ ကလေးတွေပါလာတယ်ပါ။
နက်ဖြန်တော့ တောင်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်………………..
မန်းလေးသားရှဲတီးဝိုင်းက ဘိုတောက်သီချင်းလေး အော်ဆိုလိုက်ပါအုံးမယ်
တောပျော် တောပျော် တောမှာဘဲပျော်ပျော်နေချင်တယ်………………….
ကိုဆာမိတို့ အပ္ပနားတို့ လာခဲ့လိုက်ပါလာ.
ရိုက်တတ်လိုက်တာ ရိုက်တတ်လိုက်တာ နော်—–
ကဲ ကဲ ဂျိုးဖြူကန်မှ ရေမရလို့ချိတ်ညစ်နေကြသူရွာသား/ရွာသူအပေါင်း၊စိတ်ကူးနှင့်သာ တစ်ဝဂျီးရေ ချိုးကြ ပေရော့ဗျား။
များ ရိုက်ပြီး ရွာထဲ တင်ပေးချင်လို့ 
ကိုယ်နဲ့အတူပါတဲ့လူတွေက ယုံရတာဟုတ်ဘူး လက်ယားနေတဲ့သူတွေချည်းဘဲ။